छविले खुलाए घर झगडको वास्तविक रहस्य ! शिल्पाको बारेमा यस्तो खुलासा ! (हेर्नुहोस भिडियो)
काठमाडौं– अभिनेत्री शिल्पा पोखरेलले आफू माथी घरेलु हिंसा भएको भन्दै श्रीमान विरुद्ध उजुरी दिईन। उजुरीको आधारमा प्रहरीले उनका श्रीमान् छवि ओझा उनलाई बोलायो । उनिहरु प्रहरी सम्म पुगेर अब यस्तो घटना नहुने शर्तमा मिलेर फर्किए । छवि विरूद्धकाे उजुरीमा महानगरीय प्रहरी परिसरमा मिलापत्रपछि बाहिरिने क्रममा शिल्पा सञ्चारकर्मीकै अगाडि राेएकी थिइन् । त्यसपछाडि प्रकाशित एक अन्तर्वार्तामा शिल्पाले विहेकाे एक महिनापछि नै छविकाे रूप फेरिएकाे र हरेक कुरामा शंका गर्ने गरेकाे तथा घटना भएकाे दिन घाटी थिचेर मार्न खाेजेपछि भागेर दाइकाे घर पुगेकाे उल्लेख गरेकी थिइन। उनले आफूमाथि भएको सबै हिंसा सो अन्तर्वार्तामा खुलाएकी थिइन।
यस बिषयमा नायिका केकि अधिकारिले “उनी किन रोईन?” भन्दै मार्मिक तथ सान्दर्भिक स्टाटस लेखिन । यस्तै गायिका ज्योती मगरले पनि यस बिषयमा फेसबुकमा नै स्टाटस लेखेकी थिईन ।
केकि अधिकारीले फेसबुकमा लेखेको स्टाटस यस्तो छ :
उनी रोईन् किनकी आफ्नो देवर, आफ्नो नन्द, आफ्नो आमाजुहरुसँग उनको बोली गुलियो भएन छ। सासुससुरालाई ढोग्न बिर्सिएछिन्। उनी रोईन् किनकी उनी दाईजो कम ल्याउने बुहारी परिछिन्। उनी रोईन् किनकी उनी असल आमा हुनसकिनछिन् । उनी रोईन् किनकी उनी असल ठूली आमा हुन्। सानीमा हुन्। आमा होईनन्। बाँझी हुन्। उनी रोईन् किनकी अलग्गै भविष्य उनको पनि हुनसक्थ्यो। उनी रोईन् किनकी उनीसँग पनि शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरु छन्। गाउन सक्ने गला छ। नाच्न सक्ने कम्मर छ। उनी रोईन् किनकी पलंगमा एउटा छेउ छ। सुँक्क आवाजलाई दबाउन सक्ने सिरानी छ। आफ्नै श्रीमानबाट बलात्कृत भएको अनुभव छ ।
ज्योती मगरले फेसबुकमा लेखेको स्टाटस यस्तो छ :
कसलाई के के लाग्छ थाहा छैन मलाई लाग्छ “सिल्पा पोख्रेल” घरेलु हिंसा को सिकार भयकी छिन…एउटा छोरी मान्छे सानो तिनो कुरा मा पोलिस चौकी सम्म धाउदैन त्यो माथी पनी उनी सेलिब्रेटी… सिल्पा त एउटा नमुना मात्रै हुन वास्तव मा इज्जत संग परिवार संग समाज संग डराएर हिंसा सहने नारी हरु कती कती…
मलाई त खुशी लाग्यो उहाले चाल्नु भयको कदम अर्को एउटा नारी को लागी हिम्मत हुनेछ…छबी uncle plz यार नारी प्रधान चलचित्र बनाउने तर नारी लाई नै हिंसा गर्ने यो त भयन नी फेरि आरोप मात्रै हो भन्नुहोला 4/4 ओटी श्रीमती गलत हजुर सही त हुनै सक्दैन… by the way धेरै जना ले रेखा थापा र सिल्पा पोख्रेल लाई star बनाको भनेर नभन्नुस किन कि दुध दिने गाइ लाई नै घास हालिन्छ…
सबै जना ले बुज्नु पर्ने कुरा छबी uncle हिरासत मा हुनुन्न यसको मतलब गल्ती नगरेर होइन कि सिल्पा ले माफ गर्न सक्ने ठुलो मन देखायर पनी हुन सक्छ…म सम्पूर्ण महिला दिदी बहिनि लाई यो भन्न चाहन्छु कि लोग्ने स्वास्नी को झगडा पराल को आगो भनेर सामान्य रुप मा नलिनुस तेही पराल को आगो ले धेरै को जिन्दगी नस्ट गरेको छ आज तपाइले गरेको माफी ले भोली तपाई कि छोरी लाई असर गर्छ उनले पनी हिंसा सहनु पर्छ…
यस घटनाको बिषयमा शिल्पा पोखरेलले पनि नेपाल लाईभलाई बिस्तृत अन्तरबार्ता दिईन । केही ब्यक्तिको टिकाटिप्पणी पनि आए । घटना भएको केही दिन पछि छवि ओझाले सुत्र टिभी संग अन्तरबार्तामा उनले आफ्नो कुराहरु राखेका छन । शिल्पा, छबिको वास्तविक रहस्य के थियो ?
हेर्नुहोस छवि ओझा संगको कुराकानी :